Gated ဒါမှမဟုတ် Non-Gated Content - ဘယ်တော့လဲ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘယ်လို ... | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 26, 2017 Mike Tirone
သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုသူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အပြုအမူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများနှင့်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်၏ ၀ ယ်သူ၏စိတ်ကိုရှေ့တန်းတင်ရန်၊ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်ကူညီခြင်းနှင့်လူသိများသော ၀ ယ်သူ၏ခရီးသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းစသည်တို့သည်များစွာခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့လိုအပ်ချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားများနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျရှိသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုထိုလုပ်ငန်းစဉ်အားလောင်ကျွမ်းရန်အကောင်းဆုံးအချိန်တွင်ပေးသည်။
သို့သော် ဆက်လက်၍ မေးရန်ရှိသောမေးခွန်းမှာထိုအကြောင်းအရာအချို့ကိုသင်၏ပရိသတ်မှဝှက်ထားသင့်သလား။
သင်၏စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ သင်၏အကြောင်းအရာအချို့ကိုဖျောက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်“ ဖုံးကွယ်ခြင်း” သည်ခဲထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဒေတာစုဆောင်းခြင်း၊ ခွဲခြင်း၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်သင်၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်အတူတန်ဖိုးထားမှုသို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်မှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Gate အကြောင်းအရာ?
ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတည်ဆောက်ရန်နှင့်သင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ရှာဖွေသည့်အခါအကြောင်းအရာများကို Gating သည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ များလွန်းသောအကြောင်းအရာများကိုရယူသောအခါပေါ်ပေါက်လာသောပြproblemနာမှာသင်ဖြစ်နိုင်သည့်ပရိသတ်များကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူများကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌လူသိရှင်ကြားဖြစ်သော်လည်းတံခါးဖွင့်ထားလျှင်ထိုတံခါးသည်ပရိသတ်ကိုရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်မြင်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုစုဆောင်းခြင်း၏မဟာဗျူဟာသည်အသုံးပြုသူများကိုသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးချေမှုကိုလက်ခံရန်အားပေးရန်အားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သောစွန့်စားရမှုသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသောအကြောင်းအရာကိုတားဆီးခြင်းသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။
Gating / Gating မပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Query Volume ကိုရှာပါ
သူတို့သည်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာရန်လော။
၀ ယ်ယူသူသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များနှင့်ဝယ်ယူမှုအဆင့်ကြားတွင်ရှိပါက၎င်းတို့သည်တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုလက်ခံရရှိရန်သူတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုပေးလိုသောကြောင့်ဂိတ်တင်ထားသည့်အချက်အလက်များသည်အချက်အလက်များပြုစုပျိုးထောင်ရန်နှင့်ပိုမိုစုဆောင်းရန်အတွက်ပိုမိုထိရောက်သည်။ ၎င်း“ ကတ္တီပါကြိုးကြိုး” ကိုသီးသန့်သီးသန့်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည်“ ပရီမီယံ” အကြောင်းအရာအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုပေးနိုင်သော်လည်းအကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိမ်းထားပါက၎င်း၏ပစ်မှတ်သက်ရောက်မှုကိုဆုံးရှုံးသည်။
သင်၏ပရိသတ်အတွက်တိကျသောထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုတံခါးဖွင့်ထားခြင်းက ပို၍ တန်ဖိုးရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်သူတို့၏ပရိသတ်ကို ပိုမို၍ ပစ်မှတ်ထားပြီးပရိသတ်နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Search Query Volume အတွက်မေးခွန်းများ -
Gated content segments များသည်အဖိုးတန်သောအကြောင်းအရာများမှရှာဖွေသူများကိုရှာဖွေသည်။ အကယ်၍ အော်ဂဲနစ်ပရိသတ်သည်သင်၏ content တွင်တန်ဖိုးကိုရှာလိမ့်မည်ဟုသင်မယုံလျှင်၊ ရှာဖွေခြင်းမှဖယ်ရှားခြင်း (gating) သည်အလွယ်တကူပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရာတွင်အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုမှာအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းကိုသင်လွတ်သွားမလားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ရှာဖွေနေသောပရိသတ်သည်ရှာဖွေရန် Google Webmaster Tools ကိုသုံးပါ အကြောင်းအရာအတွင်းအဓိကဝေါဟာရများ လုံလောက်သည် အကယ်၍ ထိုရှာဖွေသူများသည်သင်ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင်အကြောင်းအရာကို ungated ထားခြင်းမပြုရန်စဉ်းစားပါ။
ထို့အပြင်၊ ဖောက်သည်ခရီးတွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ အကြောင်းအရာများကိုအမှတ်အသားပြုခြင်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ထားသောခရီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသိအမြင် (ထိပ်ဆုံးမှ) သည် ပိုမို၍ ယေဘူယျအားဖြင့်လူအများရှေ့ရှုမြင်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသွားသည့်လမ်းကြောင်းသို့ကျသည်နှင့်အမျှ၊ သူတို့အတွက်ပါအကြောင်းအရာသည် ပို၍ တန်ဖိုးရှိသည်။ တန်ဖိုးရှိသည့်အရာများကဲ့သို့ပင်လူတို့သည်၎င်းအတွက်ပေးသည် / ပေးချေရန်ဆန္ဒရှိကြသည်။
ဤအကြောင်းအရာသည်အထူးသဖြင့်ပရိုဂရမ်၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်ကုန်၊
Wပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ဤအကြောင်းအရာသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည် (သို့) သက်ဆိုင်မှုရှိပါသလား။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူခရီးသွားသည့်အကြောင်းအရာကိုမြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့်သင်၏ပါဝင်မှု၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုတန်ဖိုးကိုနားလည်ခြင်းအပြင်သင်၏အကြောင်းအရာဖြေရှင်းခြင်းပြtheနာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ လိုအပ်ချက်၊ ဆန္ဒ၊ နာကျင်မှု၊ သုတေသနအမျိုးအစားစသည်တို့ကိုတိကျစွာဖော်ပြထားသောအလွန်တိကျသောပါဝင်မှုသည်ပရိသတ်အတွက်သူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးတက်စေသည်။ ထို့နောက်ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို site visitors ည့်သည်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များကိုခွဲခြားရန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အခြားအီးမေးလ်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် / ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း (သို့) လူမှုဖြန့်ဖြူးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားရုပ်သံလိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးထိရောက်သည့်လှုပ်ရှားမှုများသို့သင့်လျော်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုခွဲခြားရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်အချက်အလက်များအားဂိတ်တင်ခြင်းနှင့်တားဆီးခြင်းသည်နည်းဗျူဟာကျသောနည်းလမ်းဖြင့်စနစ်တကျသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။ ဘုံထောက်ခံချက်မှာအကြောင်းအရာကိုသင့်လျော်စွာ tag လုပ်ရန်နှင့်မည်သည့်အပိုင်းများကို“ ပရီမီယံ” အဖြစ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မည်ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
ဒီဂျစ်တယ်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်အဆက်မပြတ်ရေလွှမ်းမိုးနေသည့်အချိန်တွင်၎င်းတို့အားမဟာဗျူဟာကျသောရောနှောထားသောရောနှောထားသောအကြောင်းအရာများဖြင့်မည်သို့ပြုစုပျိုးထောင်ရမည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဟာပထမဆုံးထိတွေ့မှုအတွက်သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်အသုံးပြုသူအတွက်မှန်ကန်သော“ စျေးနှုန်း” အတွက်မှန်ကန်သောအချိန်ကာလကတော့မှန်ကန်မှုရှိစေမယ့်အရာတွေကိုသူတို့ပြန်လာစေမှာဖြစ်တယ်။
Tags: အကြောင်းအရာခရီးဖောက်သည်ခရီးဖောက်သည်ခရီးဇာတ်စင်gated အကြောင်းအရာအကြောင်းအရာသိုလှောင်ခြင်းhyper- ပစ်မှတ်ထားရှာဖွေရေးမေးမြန်းမှု volumeပစ်မှတ်ထားအကြောင်းအရာ
Mike သည်အကြီးတန်းဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်သည် R2i။ သူဟာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်သူ၊ ၎င်းကိုဖန်တီးခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ စားသုံးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ စာရေးဆရာဘွဲ့ရှိသောသဘာဝဆက်သွယ်ပြောဆိုသူ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာဓာတ်ပုံကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောကတွင်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုသည်အကြီးတန်းဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားသည်။